एलन मस्कको ट्विटर किन्ने डिलको ‘वेटिङ पिरियड’ सकियो, १ अर्ब डलर जरिवाना हुन सक्ने
काठमाण्डौ । ट्विटरले एलन मस्कको ट्विटर किन्ने ४४ अर्ब डलरको सम्झौताको वेटिङ पिरियड हार्ट–स्कट–रोडिनो एन्टिट्रस्ट इम्प्रुभमेन्ट (एचआरएस) ऐनअनुसार समाप्त जनाएको छ। अब यसलाई ट्विटरको स्टकहोल्ड र नियामक प्राधिकरणले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। विश्वका सबैभन्दा धनीव्यक्ति एलन मस्कले हालै ट्विटर किन्ने घोषणा गरेका थिए। ट्विटर किन्न...
राष्ट्रपतिको अपरम्परागत नीतिले टर्कीको मुद्रास्फीति २३ वर्षयताकै उच्च, दुई वर्षमै ४ गभर्नर फेरिए
काठमाण्डौ । टर्कीको मुद्रास्फीति दर ७३.५ प्रतिशतको उच्च विन्दुमा पुगेको छ। मे महिनाको टर्कीको मुद्रास्फीति गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। जुन २३ वर्षयताकै उच्च हो। खाद्यान्न तथा इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि र राष्ट्रपति रेकेप तेइप इर्डोगानको मौद्रिक नीतिीमाथिको लामो समयदेखिको अपरम्परागत रणनीतिले...
पाकिस्तानमा एकैपटक रु. ३० ले बढ्यो पेट्रोलको भाउ, अब लिटरको रु. २०९
काठमाण्डौ । अहिले पाकिस्तानमा पेट्रोलको मूल्य उछाल आइरहेको छ। पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मिफ्ताह इस्माइलले बिहीबार फेरि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेका छन्। योसँगै पाकिस्तानमा प्रतिलिटर पेट्रोलको भाउ २०९.८६ रुपैयाँ पुगेको छ। गत हप्ता पनि पाकिस्तानले पेट्रोलको मूल्य ३० रुपैयाँ बढाएको थियो। ...
तेलको आपूर्ति बढाउन ओपेक सहमत, टर्ला मन्दीको सम्भावना ?
काठमाण्डौ । अबको दुई महिनाको अवधिमा तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको संगठन ‘ओपेक’ ले कच्चा तेलको आपूर्ति बढाउने भएको छ। पश्चिमा देशहरुको प्रतिबन्धका कारण रुसी तेलको उत्पादनमा कमी आउन थालेसँगै ओपेक तेलको आपूर्ति बढाउन सहमत भएको हो। ओपेकले जुलाईमा तेलको आपूर्ति प्रतिदिन ६ लाख ४८ हजार ब्यारेल र अगस्टमा २ लाख ब्यारेलले वृद्धि गर्ने जनाएको छ।...
सस्तोमा रुसी तेल उठाएर युरोपमा बेचेर मालामाल बन्दै भारतका निजी रिफाइनिङ कम्पनी
काठमाण्डौ । भारतको तेल रिफाइनिङ सेक्टर यतिबेला दुई हिस्सामा बाँडिएको छ। भारतका निजी तेल रिफाइनिङ कम्पनीहरु आफ्नो मुनाफा बढाउनका लागि सस्तोमा रुसी कच्चा तेल खरिद गरिरहेका छन्। जब कि भारतका सरकारी रिफाइनरी कम्पनीहरु आफ्नो वार्षिक सम्झौताअनुसार नै कच्चा तेल खरिद गरिरहेका छन्। यस्तै भारतीय निजी रिफाइनिङ कम्पनीहरु अधिकांश तेल विदेशी...
रुसमाथि ईयूको प्रतिबन्धसँगै साउदी अरब तेल उत्पादन बढाउन तयार, विश्व बजारमा घट्यो मूल्य
काठमाण्डौ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ। युरोपेली संघको प्रतिबन्धपछि रुसको उत्पादनमा उल्लेखनीय कमी आएमा साउदी अरब कच्चा तेलको उत्पादन बढाउन तयार रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको हो। फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार साउदी अरब आपूर्ति अभावको जोखिमप्रति र तेलको मूल्यमा नियन्त्रण...
कर्मचारीलाई एलन मस्कको उर्दी–‘या अफिसमा आएर काम गर वा टेस्ला छाड’
काठमाण्डौ । एलन मस्कले आफ्नो इलेक्ट्रिक कार कम्पनी टेस्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुका कडा उर्दी जारी गरेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा टेस्लासँग जोडिएको एउटा मेल लिक भएको छ। जसमा कोरोनाका कारण सुरु भएको वर्क फ्रम होम अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ। मेलमा कर्मचारीलाई कम्तीमा साताको ४० घन्टा अफिसमा आएर काम गर्न लेखिएको छ। अर्थात टेस्ला...
धमाधम सस्तोमा रुसी तेल किन्दै भारत, नौगुणाले बढायो आयात
काठमाण्डौ । भारतमा रुसी तेलको आयात निरन्तर बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ पश्चिमा राष्ट्रहरुले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। वित्तीय बजार र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित डाटा उपलब्ध गराउने अमेरिकी–ब्रिटिस प्रदायक रेफिनिटिवको अनुमानअनुसार मे महिनामा रुसबाट भारतमा कच्चा तेल आयात ३०.३६ लाख मेट्रिकटन पुग्नेछ। यो गत वर्ष रुसबाट...
किन डलरको तुलनामा कमजोर बन्दैछ पाउन्ड स्ट्रेलिङ ? यस्ता छन् कारण
काठमाण्डौ । घट्दो आर्थिक वृद्धि र बढ्दो जोखिमका कारण लगानीकर्ता टाढिँदा पाउन्ड स्ट्रेलिङ ‘उदयीमान बजार मुद्रा’ बन्ने खतरा बढेको छ। मंगलबारको साँझसम्म पाउन्ड स्ट्रलिङको मूल्य डलरको तुलनामा ७ प्रतिशतले घटेको छ। अहिले १ पाउन्ड बराबर १.२६ डलर छ। जुन मे महिनाको सुरुआतमा १.२२ डलर थियो। युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी आर्थिक चुनौती,...
रसियामाथि इयूबाट आयात प्रतिबन्धको निर्णयलगत्तै क्रूडको मूल्यमा उछाल, महङ्गी अझै बढ्ने चिन्ता
काठमाण्डौ । यूरोपियन यूनियनका नेताहरुले यो वर्षको अन्तसम्ममा रसियाबाट आयात हुने कच्चा तेलमा ९० प्रतिशतसम्मको कटौति गर्ने सहमति गरेलगत्तै अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भारि वृद्धि भएको छ । रसियाबाट आउने कच्चा तेलमा प्रतिबन्ध लगाउन इयूमा भएको सहमतिलगत्तै मंगलबार नै यूएस क्रूड फ्यूचरको मूल्यमा ३.७६ प्रतिशतको उछाल आई प्रति...
आफ्नो लुगा बेचेर भए पनि जनतालाई सस्तोमा पिठो उपलब्ध गराउने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाण्डौ । पाकिस्तान यतिबेला गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ। एकातिर विदेशी ऋणको बोझ र विदेशी मुद्रा सञ्चिती न्यून तहमा छ भने अर्कोतिर पिठोलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य आकासिएको छ। आर्थिक संकटबीच पाकिस्तानमा राजनीति खिचातानी पनि चर्किएको छ। हालै सत्ताबाट बाहिरिएका इमरान खानले आफ्ना समर्थकसँग र्‍याली निकालिरहेका छन�...
रुसी तेल आयातमा ९०% कटौती गर्नेमा युरोप सहमत
काठमाण्डौ । युरोपेली संघ (ईयू)का नेताहरुले यो वर्षको अन्त्यसम्म रुसबाट आउने तेलको करिब ९० प्रतिशत कटौती गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन्। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार युक्रेनलाई सहायता उपलब्ध गराउन बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा बोलाइएको दुईदिने बैठकको पहिलो दिन सोमबार उक्त सहमति गरिएको हो । बैठकमा ईयू नेताहरुले हंगेरीसँग...
बेलायतमा अब चार दिन काम, तीन दिन आराम
काठमाण्डौ । बेलायतमा अब ४ दिन काम र बाँकी दिन आरामको व्यवस्था गरिने भएको छ। स्पेन, आइसल्यान्ड, अमेरिका र क्यानडापछि अब बेलायमा पनि काम र व्यक्तिगत जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था कायम गर्न लागिएको हो। बेलायतका ६० वटा ठूला कम्पनीले १ जुनदेखि यो व्यवस्थाको परीक्षण गर्न भएका छन्। यो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य...